Iimeyile zibonisa oososayensi baxoxa ngokufihla ukubandakanyeka kwabo kwileta ephambili yejenali kwimvelaphi yeCovid- Ilungelo laseMelika lokwazi
ezaposwa ngomhla Februwari 15, 2021 by USainath Suryanarayanan
UMongameli we-EcoHealth Alliance uPeter Daszak, intloko yombutho obandakanyekayo kuphando olusebenzisa i-coronaviruses yemfuza, uxoxe ngokufihla indima yakhe ingxelo epapashwe kunyaka ophelileyo ngo Lancet egweba njenge “theori zelenqe” ixhala lokuba intsholongwane i-COVID-19 inokuba ivele kwilebhu yophando, ii-imeyile ezifunyenwe yi-US Right to Know show.
Isiteyitimenti seLancet, esisayinwe ngoososayensi abaziwayo abangama-27, sibe nefuthe ekunciphiseni urhano kwizazinzulu ezithile ukuba i-COVID-19 inokuba nobudlelwane ne-Wuhan Institute of Virology yase China, enophando olunxulumene ne-EcoHealth Alliance.
UDaszak wayila ingxelo kwaye wayisasaza kwezinye izazinzulu ukuba zisayine. Kodwa i email kutyhila ukuba uDaszak kunye nabanye oososayensi abasebenzisana ne-EcoHealth bacinga ukuba akufuneki basayine ingxelo ukuze bafihle ukubandakanyeka kwabo kuyo. Ukushiya amagama abo kwingxelo kuya kuyinika "umgama othile kuthi kwaye ke ayisebenzi ngendlela ephikisayo," ubhale watsho uDaszak.
UDaszak uqaphele ukuba "angayithumela ajikeleze" kwezinye izazinzulu ukuba zisayine. "Emva koko siza kuyibeka ngendlela engadibanisiyo nentsebenziswano yethu ukuze sonyuse ilizwi elizimeleyo," ubhale watsho.
Oososayensi ababini u-Daszak ubhalele malunga nesidingo sokwenza iphepha libonakale lizimeleyo kwi-EcoHealth, ziingcali ze-coronavirus uRalph Baric noLinfa Wang.
Kwiimeyile, uBaric wavumelana nengcebiso kaDaszak yokuba angatyikityi Lancet Isiteyitimenti, sibhala "Ngaphandle koko kubonakala ngathi kukuzenzela, kwaye siphulukana nefuthe."
UDaszak ekugqibeleni wayisayina ngokwakhe ingxelo, kodwa akazange achongwe njengombhali okanye umququzeleli womzamo.
Ii-imeyile ziyinxalenye yamaxwebhu afunyenwe yi-US Right to Know ebonisa ukuba iDaszak ibisebenza ukusukela ekuqaleni konyaka ophelileyo ukujongela phantsi ingcinga ukuba i-SARS-CoV-2 inokuba ivuza kwi IZiko laseWuhan.
Ukuqhambuka kokuqala kwe-COVID-19 kwakukwisixeko saseWuhan.
Ilungelo lase-US lokwazi ngaphambili uxele ukuba uDaszak wayila ingxelo Lancet, kwaye wayilungiselela ukuba "Ingabonakali njengevela kumbutho omnye okanye umntu omnye" kodwa kunokuba kubonwe njenge “Ileta nje evela kwizazinzulu eziphambili”.
Umanyano lwe-EcoHealth yinto engenzi nzuzo ese-New York efumene izigidi zeedola kwinkxaso mali yomhlawuli werhafu waseMelika ekusebenziseni i-coronaviruses yemfuza, kubandakanya nezazinzulu kwiZiko laseWuhan.
Ngokukodwa, iDaszak ivele njengoyena mntu uphambili kuphando olusemthethweni ngemvelaphi ye-SARS-CoV-2. Ulilungu le iWorld Health OrganizationIqela leengcali ezilanda imvelaphi yenoveli, kunye Lancet IKhomishini ye-COVID 19.
Jonga ingxelo yethu yangaphambili kwesi sihloko:
Ii-imeyile ezintsha zibonisa iingxoxo zesayensi malunga nendlela yokuxoxa ngemvelaphi ye-SARS-CoV-2 (12.14.20)
Isazinzulu esinongquzulwano lomdla esikhokelayo Lancet I-COVID-19 ikhomishini kwi-virus imvelaphi (11.24.20)
Umbutho we-EcoHealth Alliance wenza amalungiselelo esiteyitimenti sososayensi “ngemvelaphi yendalo” ye-SARS-CoV-2 (11.18.21)
Bhalisela iincwadana zethu zasimahla ukufumana uhlaziyo rhoqo kuphando lwethu lwee-biohazards.
IiBiohazards, IBhlogazards Blog, Uphando lwethu I-Covid-19, Umanyano lwe-EcoHealth, imvelaphi yeSARS-CoV-2, Imvelaphi yesifo, Ikhomishini ye-Lancet ye-COVID
Matshi 7, 2021